Ahoana ny fametrahana fetra amin'ny fotoana ampiasanao ny findainao amin'ny EMUI | Androidsis
Ora maro laninay amin'ny fampiasana finday amin'ny faran'ny andro, na hamaly hafatra, zahao ireo mailaka na asa asa sasany. Betsaka ny olona mandany salan'isa tsara eo alohan'izy ireo, fa ny zavatra mahasalama indrindra dia ny mamaritra fetr'andro, ho anao sy ny zanakao.
Misy rindranasa samihafa ao amin'ny Play Store ahafahantsika mametra ny fampiasana finday mandritra ny ora antoandro, fa ny EMUI ho an'ny Huawei sy Honor terminal dia manana limiter anatiny. Tena miasa izy io, antsoina hoe Digital Balance ary mitovy amin'ny Digital Wellbeing, ny safidy farany azo avy amin'ireo mpamokatra Android antoko fahatelo.
Ireo mpampiasa Huawei sy Honor dia afaka mametra ny ora fampiasana amin'ny Digital Balance amin'ny fampiharana manokana na telefaona iray manontolo. Ny fitsipika dia mety azo alamina, azonao atao ny mamaritra ny ora hahafahanao mampiasa azy sy ny hafa izay tsy, tsara raha toa ka mila mifantoka amin'ny asa ianao.
Raha vantany vao manokatra ny safidy ianao dia manana fifehezana ho an'ny ray aman-dreny, satria hanontany anao izy hoe iza no hampiasa an'ity fitaovana ity, na ianao na ny zanakao. Amin'ny tranga faharoa dia mifanaraka amin'ny Control Parental ary ho azonao atao ny mametra pejy sasany amin'ny Internet, fampiharana ary maro hafa.
Mametraka fetra amin'ny fotoana ampiasanao ny finday ao amin'ny EMUI mila manao izao manaraka izao ianao:
Sokafy ny fikirana ao amin'ny fitaovana Huawei / Honor miaraka amin'ny EMUI
Midira amin'ny safidy "Balance Digital" ary namely Start
Misafidy "I" na "Zanako" raha vao ao anaty, raha vao misafidy ianao dia tsindrio OK
Raha vantany vao navadika ny "Time of use management" dia azonao atao ny mametraka ny sivana tadiavinao, ohatra ny fotoana eo alohan'ny efijery, ny fetran'ny fampiharana ary ny fotoana ampiasana azy
Mandeha lavidavitra kokoa ilay rindranasa, misy ihany koa «Fampandrenesana fihetsika», mety raha mijoro amin'ny toerana diso ianao dia hampiseho hafatra manaitra anao
Ny safidy farany dia ny PIN amin'ny fifandanjana nomerika, hanontany anao izy raha mampihetsika azy hanova ireo toe-javatra Digital Balance, ny zavatra tsara dia apetrakao ianao mba tsy hanovan'ny zanakao azy io ary afaka hiditra amina fampiharana, lalao na pejy sasany.
Ny EMUI Digital Balance dia hilaza aminao ny ora fampiasanao izay fanaonao mahazatraRaha tsindrio ny "More", dia holazaina aminao ny ora fampiasan'ny "Androany" sy ny fito andro farany, na ny fizahana, amin'ny alàlan'ny Telegram, WhatsApp ary rindranasa hafa izay sokafanao ara-dalàna amin'ny telefaoninao.
Raha te hampandeha azy mandritra ny ora fiasana ianao, dia tsara kokoa ny mampihatra ny lalàna mahazatra indrindra, ohatra, ny famerana ny fampiasana ny fampiharana izay mandroaka anay, toy ny mpanjifa fandefasan-kafatra. Vantany vao mivoaka ny andro fiasana, dia esory fotsiny eo ambany, eo amin'ilay safidy hoe "Esory ny fifandanjana nomerika".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ahoana ny fametrahana fetra amin'ny fotoana ampiasanao ny findainao amin'ny EMUI
Ny hetsika Lunar Beast dia tonga amin'ny League of Legends Wild Rift miaraka amin'ny Mode Spectator, Replays, ary maro hafa
Ny Oppo Find X3 akaiky kokoa ny mahagaga anay